Nederland oo dadkeeda ku taageeri doonto 4000 euro qofkii iibsanaya gaari koronto ku… – Hagaag.com
Nederland oo dadkeeda ku taageeri doonto 4000 euro qofkii iibsanaya gaari koronto ku…
Posted on 5 Febraayo 2020 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Nederland ayaa waxay taageeri doontaa gaadiidka cagaaran ee dhibka ku aheyn cimilada sanadkaan iyadoo siinaysa darawalada lacag ay ku kaalmeystaan gadashada gawaarida ku shaqeyeeya korontada. Tani waxay khusaysaa iibsashada gawaarida cusub iyo kuwa la adeegsaday intuba.
Sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay Hay’ada Wararka Holland (RTL), haddii aad ku nooshahay Nederland oo aad rabto inaad iibsato gaari cusub oo koronto ku shaqeeya iibso wixii ka dambeeya 1-da Luulyo ee sannadkan, waxaad heli kartaa afar kun oo euro ($ 4425) oo dowlada ku siin doonta. Haddii aad iibsato gaari koronto ku shaqeeya oo horey loo soo isticmaalay waxaad heli doontaa 2211 dollars.
Kabista ayaa lagu dabaqi doonaa oo keliya baabuurta uu qiimahoodu gaaro 45,000 Euro ($ 49,744) si loogu beddelo darawalada istiicmaala gawaarida shidaalka iyo naaftada, loona bedelo kuwo u roon bay’ada iyo cimilada.
Si aad ugu qalanto ka faa’ideysiga kaalmadan ee gaariga korontada ku shaqeeya, waxaa waajib ah inaad ku dhex jirtid heerarka dowlada, waana inaad ka soo iibsataa ganacsade gaar ah.
Maheli doontid lacagta haddii gaariga aad ka iibsatid xayeysiisyada ee joornaalada gawaarida, si looga hortaga wax isdabamarin ah.
Waxa intaa dheer, dawladda ayaa sidoo kale ka fiirsaneysa inay siiso dhiirigelin dheeri ah oo aan dhaqaale ahayn iibsadayaasha gawaarida korontada ku shaqeeya, waxayna ka fiirsaneysaa sida ay ku siin karto dammaanad ku saabsan casriyeynta soft ware-ka iyo damaanadda batteriga.
Faahfaahinta buuxda ee barnaamijkan taageerada ayaa la filayaa in lagu dhawaaqo toddobaadyada soo socda.
Maaddaama gawaarida korontada ku shaqeeya oo badan ay soo geli doonaan suuqa shanta sano ee soo socota, kadib kabida ayaa si tartiib ah loo goyn doonaa, waxaana si gebi ahaanba loo jari doonaa sanadka 2025.
Nederland keliya ma ahan waddankii ugu horreeyay ee bixiya dhiirigelin dhaqaale si dadka looga kaxeeyo gawaarida shidaalka oo loogu weeciyo baabuurta korontada.
Sidoo kale dawladda Britain ayaa waxay u qoondeysay lacag gaareysa 3,500 pound ($ 4,570) iibsadayaasha khaaska ah si ay ugu iibsadaan baabuur koronto ku shaqeeya.
Haddii aad Nederlandays tahay ama ku nooshahay oo aad rabto inaad ku beddelato gaarigaaga hadda aad heysatid mid koronto, waxay umuuqataa in bisha July ee soo socota ay tahay waqtiga ugu munaasabsan inaad gaari iibsatid.